समाचार - कसरी जोडी, स्थापना र खनन फ्लैट लिंक चेन मर्मत गर्न?
कसरी जोड्ने, स्थापना र रखरखाव को खनन फ्लैट लिंक चेन?
३० बर्ष को लागी एक गोल इस्पात लिंक चेन निर्माता को रूप मा, हामी जोड्ने, स्थापना र खनन फ्लैट लिंक चेन को रखरखाव को तरीका साझा गर्न खुसी छौं।
1. उत्पादन सुविधाहरु
खानी उच्च शक्ति फ्लैट लिंक चेन ठूलो असर क्षमता, बलियो लगाउने प्रतिरोध, राम्रो प्रभाव क्रूरता र लामो थकान जीवन को विशेषताहरु छ।
2. मुख्य उद्देश्य र आवेदन को दायरा
यो व्यापक रूपमा बख़्तरबंद अनुहार कन्वेयर (AFC) र बीम स्टेज लोडर (BSL) कोइला खानी मा प्रयोग गरीन्छ।
3. कार्यकारी मानक
मीट्रिक टन / t929-2004, दीन 22255
4. जोडा र स्थापना
4.1 फ्लैट लिंक चेन जोडा
खानी फ्लैट लिंक चेन को सही जोडा कन्वेयर को सफल संचालन को लागी आवश्यक छ। जब चेन कारखाना छोड्छ, यो एक-बाट-एक चेन लिंक संग जोडिएको छ सुनिश्चित गर्न को लागी कि स्क्रैपर एक सीधी लाइन मा छ र स्क्रैपर को स्थिरता मध्य नाली मा छ। एक प्याकिंग बक्स मा जोडी फ्लैट लिंक चेन प्लेस र प्रत्येक जोडा चेन एक लेबल संलग्न। जोडीएका चेनहरु छुट्टाछुट्टै प्रयोग गरिने छैन। जोडा सहिष्णुता कुनै पनि जोडी श्रृंखला को अधिकतम स्वीकार्य लम्बाई लाई बुझाउँछ।
४.२ फ्लैट लिंक चेन स्थापना
जोडीएको फ्लैट लिंक चेन सही ढंगले चेन को प्रदर्शन लाई अनुकूलन गर्न स्क्रैपर मा भेला भएका छन्। यो सुनिश्चित गर्दछ कि चेन को दुबै पक्ष मा सहिष्णुता कम गरीएको छ र चेन तनाव प्रभावी ढंगले नियन्त्रण गरीन्छ जब स्क्रैपर कन्वेयर शुरू गरीएको छ। एक राम्रो सीधा अनुहार सुनिश्चित गर्नुहोस् र pretension को फरक कम गर्नुहोस्।
चेन जोडी मा स्थापित छ, र लामो जोडी चेन र छोटो जोडी चेन बारी मा भेला भएका छन्। नयाँ sprockets र baffles सामान्यतया जब नयाँ फ्लैट लिंक चेनहरु लाई स्थापित गरीन्छ भेला हुन्छन्।
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि फ्लैट लिंक चेन चल्दैन जब यो पहिलो स्नेहन ग्यारेन्टी बिना स्थापित छ। यदि यो स्नेहन बिना चल्छ, चेन लिंक चाँडै लगाउने छ।
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि सही tensioning प्रक्रिया खुरचनी कन्वेयर र स्थानान्तरण मिसिनहरु को लागी उपयुक्त छ। क्रम मा प्रत्येक श्रृंखला को लागी एक उपयुक्त तनाव मान बनाउन को लागी प्रत्येक दिन पूर्व तनाव को जाँच गर्नुहोस्। किनभने श्रृंखला आफैं र कन्वेयर संग यसको सहयोग को ठाउँ मा चलाउन को लागी आवश्यक छ, उपकरण संचालन को पहिलो केहि हप्ता धेरै महत्वपूर्ण छ।
5. फ्लैट लिंक चेन मर्मत
स्क्रैपर कन्वेयर चेन, स्क्रैपर र चेन जोड्ने लिंक (कनेक्टर) उपभोग्य बस्तुहरु हुन्, जुन लगाउन र क्षति पुग्न सजिलो हुन्छ जब पुन: प्रयोग गरिन्छ। तेसैले, फ्लैट लिंक चेन मर्मत श्रृंखला को सेवा जीवन लम्बाउन र चेन विफलताको न्यूनतम जोखिम सुनिश्चित गर्न को लागी धेरै महत्वपूर्ण छ।
सकेसम्म सही रूपमा काम गर्ने सतह को सीधाता कायम राख्नुहोस्।
यदि काम अनुहार सीधा छैन, यो लगाउन र श्रृंखला को लम्बाई को विभिन्न डिग्री कारण हुन सक्छ।
कतरनी को पछाडि झुकाउने कोण न्यूनतम छ। यदि यो धेरै तंग छ, यो आवश्यक शक्ति र चेन लगाउने वृद्धि हुनेछ।
चेन ब्यवस्थापन प्रक्रियाहरु लाई सुनिश्चित गर्न को लागी सुनिश्चित गर्नुहोस् कि सबै अपरेशनहरु प्रशिक्षित छन् र सबै भन्दा राम्रो अभ्यासहरु कन्वेयर निर्माता को मार्गदर्शन मा हासिल गरीएको छ, प्रक्रियाहरु को पालना, रखरखाव र रेकर्ड राख्न।
५.२ रखरखाव सिफारिशहरु
केहि कोइला खानीहरु मा, फ्लैट लिंक चेन को रखरखाव अभ्यास मुख्य रूप देखि चेन pretension को अपरेटर को पुष्टि हो, जो राम्रो संग चेन प्रदर्शन लाई नियन्त्रण गर्न सक्छ। किनभने तनाव दर घटाउने शर्त एक महत्वपूर्ण कारक श्रृंखला को प्रारम्भिक असफलता रोक्न हो। निम्न केहि प्रमुख बिन्दुहरु को एक सारांश हो, र कन्वेयर निर्माता द्वारा अगाडि राखीएको सुझावहरु लाई लागू गर्नु पर्छ।
- हरेक दिन पूर्व तनाव को जाँच गर्नुहोस्, विशेष गरी दुई वा तीन हप्ता को नयाँ स्थापना र श्रृंखला को संचालन भन्दा पहिले।
- कुनै स्पष्ट दोष वा समस्याहरु छन् भनेर सुनिश्चित गर्न को लागी शुरू गर्नु अघि कन्वेयर ढलान जाँच गर्नुहोस्।
- क्षतिग्रस्त स्क्रैपर र चेन लिंक को रूप मा सकेसम्म चाँडो बदल्नुहोस्।
- कुनै क्षतिग्रस्त वा भाँचिएको चेन हटाउनुहोस् र आसन्न चेन को लम्बाई जाँच गर्नुहोस्। यदि यो आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्दैन, यो समय मा हटाउनु पर्छ। यदि चेन लगाईएको छ, दुवै पक्ष मा चेन क्रम मा श्रृंखला को जोड़ी बनाए राख्न को लागी एकै समयमा प्रतिस्थापित गर्नु पर्छ।
- क्षतिग्रस्त चेन, baffles र sprockets जाँच गर्नुहोस् र यदि आवश्यक भए उनीहरुलाई बदल्नुहोस्।
- ढीला, हराइरहेको र क्षतिग्रस्त संलग्नक को लागी खुरचनी को निरीक्षण गर्नुहोस्।
- पहिरन र लम्बाई को लागी चेन जाँच गर्नुहोस्। किनकी लि wear्क भित्र लुगा वा लम्बाई (अधिभार संकेत) वा दुबै श्रृंखला लम्बाई हुनेछ।
जब फ्ल्याट लिंक चेन ओभरलोड र फैलिएको छ, यो स्पष्ट छ कि त्यहाँ विकृति छ, चेन लिंक को समग्र लम्बाइ मा एक प्राकृतिक वृद्धि को परिणामस्वरूप। यो आसन्न लि of्क को संख्या प्रभावित गर्न सक्छ, चेन mispairing को परिणामस्वरूप। यस मामला मा, प्रभावित भाग प्रतिस्थापन गरिनेछ, र यदि चेन लगाईएको छ, दुवै पक्ष मा चेन एकै समयमा प्रतिस्थापित गरिनेछ चेन को जोडा कायम राख्न को लागी।
- सामान्यतया, चेन elastically फैलिएको छ र अनलोडिंग पछि मूल पिच मा फर्किनेछ। लिंक को आन्तरिक लुगा श्रृंखला को पिच वृद्धि हुनेछ, लि of्क को बाह्य आयाम परिवर्तन हुनेछैन, तर श्रृंखला को समग्र लम्बाई बढ्नेछ।
- यो २.५%द्वारा चेन पिच बढाउन अनुमति छ।
6. फ्लैट लिंक चेन ढुवानी र भण्डारण
क। ढुवानी र भण्डारण को समयमा जंग को रोकथाम को लागी ध्यान दिनुहोस्;
ख भण्डारण अवधि जंग र सेवा कारक घटाउन बाट अन्य कारकहरु लाई रोक्न months महिना भन्दा बढी हुनुहुँदैन।